I-horoscope yothando enembile kunayo yonke yowesilisa nowesifazane Taurus ka-2015
Unyaka wePhongo ngeke kube lula kubantu abazalwa ngaphansi kweSign Sign - basalindele abantu abajwayelene nabo, ubudlelwane obusha, okwakungenakwenzeka ukuthi bangabi namafu ngisho nangeshwa. I-Taurus kungenzeka ibe sesimweni lapho umlingani onobuqili nokuzibophezela esebenzisa khona futhi washiya ngenhliziyo ephukile - okusinda kuyoba nzima kakhulu. Kodwa i-Taurus yomndeni ikhathazeka ngokungabi nalutho - kubo, lesi sikhathi ithembisa ukuba yize.
Love horoscope wesifazane waseTaurus ngo-2015
Ingxenye yokuqala yonyaka yabesifazane besifazane abangashadile bayodutshulwa - ngokuqinisekile bafuna ubudlelwane, ububele nokukhathalela akwanele, kodwa manje sebekulungele ukwamukela, kodwa abafuni noma abakwazi ukunikela. Ngenxa yalokhu, noma yikuphi ubuhlobo obusolwa nabo obuhlukile abuyikuthuthukiswa ngokugcwele, futhi uma owesifazane waseTaurus enganqume ukuthi yini ayesidinga - ukuzimela noma othandekayo, ubeka ingozi yokuba yedwa unyaka wonke.
I-Horoscope ithembisa owesifazane we-Taurus abe umngane onentshisekelo kude nekhaya - eholidini noma ngesikhathi sokuhamba ibhizinisi phesheya. Kukhona amathuba amakhulu ukuthi owesifazane waseTaurus uzongena kakhulu emicabangweni yakhe ukuthi uzothatha isinqumo sokuthuthela kumuntu othandekayo futhi isikhathi eside, uma kungenjalo kuze kube phakade, ushiye ikhaya lakhe.
Emndenini, owesifazane waseTaurus ngeke abe nento engathinta amandla ebuhlotsheni - ngaphandle uma efuna ukuvuselela imizwa yokuthi, isikhathi eside, umshado ungase uphele. Konke lokhu kungenzeka ukuthi owesifazane u-Taurus - kufanele athathe isinyathelo futhi anikeze umlingani uhambo oluhlangene ukuze aphumule, uma kukhona ithuba elinjalo. Uma kungenjalo, ungesabi, kubalulekile ukumane usebenzise isikhathi esiningi ndawonye futhi uhlele omunye nomunye izinto ezimangazayo, unike izipho futhi unike izimpawu ezahlukene zokunakwa.
I-horoscope ye-Love for Taurus yamadoda ka-2015
Izinkanyezi zithembisa i-free man-Taurus umhlangano othakazelisayo osekuqaleni konyaka - futhi, cishe, kubonakala sengathi uyabulala ngempela, uzovezwa imizwelo nemizwelo. Kodwa, ngeshwa, kungenzeka ukuthi lobu buhlobo ku-Taurus wesilisa buyoletha ukuhlupheka okungaphezu kokuthakazelisayo-kungenzeka ukuthi iTaurus ekhethiwe inesisusa sobugovu kuye. Nakuba i-Taurus ekhungathekile inikeza izipho ezibizayo futhi imema ezitolo zokudlela, uyayamukela imizwa yakhe ngokuthokoza, kodwa ngokushesha lapho ebona ukuthi akakwazi ukunikela noma yini enye, uzoyiyeka ngokushesha. Lokhu kungalimaza kakhulu ukwethemba kweTaurus yowesilisa kwabanye besifazane, ngakho-ke kungenzeka ukuthi uzochitha isikhathi esisele sika-2015 yedwa.
Kwabesilisa abashadile, i-Sagittarius, 2015, ngokuphambene nalokho, ubuhlobo bokuxhumana - uma ekuqaleni konyaka kungase kube khona ukungaqondi kahle okuncane nokungqubuzana okuncane, phakathi nehlobo, indoda yaseTaurus ngokwayo nengxenye yayo izokhohlwa ngokuphepha ngalokhu. Ngaphezu kwalokho, ihlobo nekwindla yisikhathi esihle semibuthano yomndeni, ukuhamba okuhlangene nezihlobo ezingakaze zibonane isikhathi eside.
Ukuphela kwekwindla nobusika ka-2015 kuyoba ubuhlobo besilisa besilisa e-Taurus ngokweqiniso ngokoqobo lwezinkanyezi - izinkanyezi zithembisa lezi zithandani ukuphefumula okusha, ngaphezu kwalokho, zibukeka kahle ngokuphila kwabo obuseduze, okungenakuphazamisa ubuhlobo.
I-horoscope yangempela yeviki likaNovemba 13-19, 2017 yizimpawu zezinkanyezi
I-Horoscope ye-Capricorn-abesifazane ngo-Okthoba 2016
Owesilisa nomuntu I-Cancer: isici sobuhlobo
I-Horoscope yeGemini-Woman kaJanuwari 2017
I-Horoscope ye-Lion-Woman ngo-Ephreli 2017
I-Aquarius: i-horoscope yokuwa 2013
Okubangela ukukhipha isisu, imiphumela kanye nezinkinga emva kokuhlinzwa
Inhlanzi ethosiwe: indlela yokuhumusha leli phupho?
Ubuchwepheshe banamuhla bokusebenzisa amavithamini ezithombeni
Imithetho eyisisekelo yokuphila okunempilo
Lapho ungahlala khona ehlobo eBulgaria
Indlela yokuqonda umuntu - iseluleko somqondo wengqondo yomndeni
Ukukhathala kwezinyawo ukusuka ekuhambeni: ukwelashwa kwabantu
Ukuzilibazisa okusha kukaSergei Bezrukov kwaqeda umshado wakhe nomkakhe
5 izindlela ezingavamile nezezintandokazi zokugcoba izicathulo: Awusola ukuthi kungenzeka
I-orgasm yowesifazane: kuyini kuye?
Izinto ezingu-10 amadoda azifunayo kowesifazane
Izinto zokuphulukisa nemilingo ye-chrysocolla
Izifo zezingane zesikole
UKsenia Sobchak uthumele isithombe sakhe sokuqala sendodana yakhe
Amaqanda ngebhethoni kuhhavini
Umyeni kaKsenia Sobchak uhlezi enkampanini yamadoda asenqunu-nesithombe, isithombe
Imishado engavamile kakhulu emhlabeni